အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သင်္ချာ SEO SEO WordPress Plugin သည်အံ့သြစရာပါ။ | Martech Zone
အဆင့်အတန်းသင်္ချာ SEO WordPress Plugin သည်အံ့သြစရာပါ!
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2021 Douglas Karr
WordPress သုံးစွဲသူအားလုံးနီးပါးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သောအလားအလာအားလုံးနီးပါးသည် Yoast ၏ WordPress SEO plugin ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုစီမံသည်။ အခမဲ့ plugin အပြင် Yoast သည်အထူး plugins များစွာကိုလည်းပေးထားသည်။
Yoast ရဲ့ SEO plugin ဟာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းငါအမြဲတမ်းတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကောင်လေးတွေရှိတယ်။
Yoast SEO စီမံခန့်ခွဲမှုဘောင်တွင်ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရှိပြီး WordPress ၏ပုံမှန်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနှင့်ကွဲပြားသည်။
Yoast သည်ရှေးရှေးလူများအားသူတို့၏လစာပေးသောပလပ်ဂင်များအားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ပြောင်းလဲရန်တွန်းအားပေးနေသည်။ ဟေ့…သူတို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးတဲ့အခမဲ့ plugin တစ်ခုပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုသူတို့ပိုက်ဆံပေးချင်တယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုအလွန်တွန်းအားပေးနေသည်။
အဆိုပါ Yoast plugin သည်အရင်းအမြစ်အတော်အတန်လိုအပ်သည် နှင့်ငါ့ site ကိုနှေးကွေးနေသည်။
မိုဘိုင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ဝေဖန်မှုနှင့်အတူသင်၏ပမာဏသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်နှေးနေလျှင်သင်ရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာပင် even ည့်သည်များဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်မြန်နှုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိကပြissueနာဖြစ်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သင်္ချာ WordPress SEO Plugin
ငါ့သူငယ်ချင်း Lorraine Ball ကဒီလိုဖော်ပြခဲ့တယ် Math SEO ပလပ်အင်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါ and I had to immediately test it out. Lorraine’s agency, မြဝတီဖောက်သည်တစ်တန်အတွက်လှပပြီးစျေးသက်သာသော WordPress ဆိုဒ်များကိုတည်ဆောက်သည်။ ငါပလပ်ဂင်ကိုစမ်းသပ်ရန်ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး၎င်းသည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းကြည့်ရှုရန်ကွန်ရက်များစွာသို့တင်ခဲ့သည်။
Yoast SEO Plugin မှ Rank Math သို့ပြောင်းရန် Wizard သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ plugin ၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်၏ site redirect အား၎င်းကို import နှင့် control လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့အဖွဲ့များကိုသင့်ရဲ့ redirects စုစည်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စေချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် plugin များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချကြောင်းအင်္ဂါရပ်များဆုံးရှုံးရကျိုးနပ်သည်။
SEO သင်္ချာနည်းအရအကြောင်းအရာများကိုရေးသားပြီးတိုးတက်စေရန် SEO သင်္ချာပညာရှင်အဆင့်သင်္ချာအားဆန်းစစ်ချက်ကိုအထူးသဖြင့်ချီးကျူးပါသည်။
Setup Wizard ကိုလိုက်လျှောက်ရန်လွယ်ကူသည် - ရာထူးသင်္ချာသည်လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည်။ Rank Math သည် WordPress အတွက် SEO ကိုစုံလင်စွာတပ်ဆင်ရန်အဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် configuration wizard ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ တပ်ဆင်ပြီးပါက Rank Math သည်သင့် site ၏ setting များကိုစစ်ဆေးပြီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးသော settings ကိုအကြံပြုသည်။ ထို့နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် wizard သည်သင်၏ဆိုဒ်၏ SEO၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ဝက်ဘ်မာစတာပရိုဖိုင်းနှင့်အခြား SEO ဆက်တင်များကိုသတ်မှတ်သည်။
Clean & Simple User Interface - Rank Math သည်သင့်တော်သောအချိန်တွင်သင့်အားမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပြရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရိုးရှင်းသော်လည်းအင်အားကောင်းသည့် user-interface သည်သင်၏ပို့စ်များနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကို post ၏ post နှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏စာမူ SEO ကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်သင်္ချာသည်အဆင့်မြင့်အတိုအထွာအစီအစဉ်များကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ သင်၏စာမူသည် SERP များမည်သို့ပေါ်လာမည်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ လူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေသောအခါသင်၏စာမူမည်သို့ကြည့်မည်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
modular မူဘောင် - သင်လိုချင်တာကိုသာ သုံး၍ ကျန်အရာများကိုပိတ်ထားပါ။ Rank သင်္ချာသည် modular framework ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း module များကိုပိတ်ထားပါ။
မြန်နှုန်းများအတွက် Optimized ကုဒ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုဒ်နံပါတ်ကိုအစမှရေးပြီးလိုင်းတိုင်းတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ ထို့ကြောင့် plugin သည်မြန်နိုင်သမျှမြန်သည်။
MyThemeShop နောက်ကွယ်မှလူများကဖန်တီးသည် - ရာထူးသင်္ချာအားဖြင့်မင်းဟာမင်းလက်ထဲရောက်နေပြီဆိုတာမင်းသိတယ်။ 150+ WordPress ထုတ်ကုန်များ၏အစုစုကို coding လုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သောပလပ်ဂင်များပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အသိပညာတွေအားလုံးကို Rank သင်္ချာထဲထည့်ပြီးပြီ။
စက်မှုလုပ်ငန်း - ဦး ဆောင်ပံ့ပိုးမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သည်။ သင်အဆင့်သင်္ချာကိုသုံးသည့်အခါသင့်အနေဖြင့်ခြောက်သွေ့။ မကျန်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် support query များနှင့် bug များကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်ထက်အမြန်ဆုံးပြန်လှည့်ရန်အချိန်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံစာစာရင်းကိုကျွန်ုပ်အဆင့်မြှင့်ပါတယ် စီးပွားရေးအတွက် WordPress plugins များ ရာထူးသင်္ချာကို Yoast နှင့် Redirection အတွက်အစားထိုးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်သေချာပါတယ်
Tags: အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော့ချက်စာလုံးတွေအဆင့်သင်္ချာseo plugin ကိုဇယားများwordpress plugin ကိုXML မြေပုံများyoast
အကျပ်အတည်းတွင်အခွန်အခအသစ်များကိုဆောက်လုပ်ရန်ရှာဖွေနေသည့်အေဂျင်စီများအတွက်ထိပ်ဆုံးအချက် ၅ ချက်